कसरी मेरो फेसबुक खाता निस्क्रिय गर्ने: सबै सम्भावित विकल्पहरू | ग्याजेट समाचार
फेसबुक हाल विश्वव्यापी सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको सामाजिक नेटवर्क हो। यद्यपि पछिल्ला दुई वर्षहरू यससँग धेरै घोटालाहरू भएका छन्, विशेष गरेर गोपनीयता र वेबमा सुरक्षा। यो कम्पनीले यस सम्भावित नेटवर्क को लागी एक खाता छ प्रयोगकर्ता को डाटा को रक्षा गर्न को लागी सबै सम्भव छैन। यस कारणका लागि, त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले सामाजिक नेटवर्कमा उनीहरूको खाता निस्क्रिय पार्ने निर्णय गरेका छन्।
यो त्यस्तो चीज हो जुन कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण, ती प्रयोगकर्ताहरूको लागि सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको खाता निष्क्रिय गर्नमा रुचि, यो सम्भव छ। यद्यपि त्यहाँ केही पक्षहरू छन् जुन फेसबुक खाता निस्क्रिय पार्ने बारेमा ध्यानमा राख्नु पर्छ। केहि पक्षहरू जुन जान्नु महत्वपूर्ण छ।
1 निष्क्रिय वा फेसबुक खाता मेटाउने हो?
2 फेसबुक खाता निष्क्रिय गर्नुहोस्
3 फेसबुक खाता मेटाउनुहोस्
निष्क्रिय वा फेसबुक खाता मेटाउने हो?
यो पहिलो अवधारणा हो जुन यस प्रक्रियामा स्पष्ट हुनुपर्दछ। फेसबुकले प्रयोगकर्ताहरूलाई यी दुई विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। खाता निष्क्रिय गर्न विकल्पको मतलब यो हो सामाजिक नेटवर्कमा खाता एक समयको लागि निष्क्रिय रहन्छ। त्यसैले कुनै पनि प्रयोगकर्ता यस व्यक्तिको प्रोफाइल भ्रमण गर्न वा उनीहरूलाई सन्देशहरू पठाउन सक्षम हुनेछैन। तर कुनै पनि खाता डाटा हटाइएको छैन। त्यसैले जब प्रयोगकर्ता फर्कन चाहन्छ, उसले केवल आफ्नो खातामा लगइन गर्नुपर्नेछ, आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डको साथ (यदि तपाईं अझै सम्झना गर्नुहुन्छ) र सबै कुरा यसमा सामान्य हुनेछ।
तर फेसबुकले विकल्पहरू मध्ये दोस्रो खाता मेटाउने हो। यसको मतलब सामाजिक नेटवर्कमा भएको खाता सदाको लागि अदृश्य हुन्छ, त्यसमा सबै डेटा मेटिने छन्। फोटो, भिडियो र सामाजिक नेटवर्कमा प्रयोगकर्ताको सन्देश मेटिने छ। यो एक धेरै अधिक पूर्ण कार्य हो, तर जसको लागि तपाईं निश्चित हुनुपर्छ।
त्यसो कि प्रयोगकर्ता के गर्न चाहन्छ भन्ने बारे स्पष्ट हुनुपर्दछ यस अर्थमा। यदि तपाई फेसबुकबाट ब्रेक लिन चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए उत्तम हुन्छ यस खातालाई निस्क्रिय गर्नमा शर्त। यसले प्रयोगकर्तालाई खातामा फर्कन अनुमति दिन्छ जब उसले भन्छ कि ब्रेक समाप्त भएको छ। तर यदि तपाईं सँधै सामाजिक नेटवर्क को उपयोग गर्न रोक्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए उत्तम छ यो खाताको मेटाईकन अघि बढ्नु। दुबै विकल्पहरू तल वर्णन गरिएका छन्।
फेसबुक खाता निष्क्रिय गर्नुहोस्
यो पहिलो विकल्पमा, सामाजिक नेटवर्कमा खाता निष्क्रिय गर्न निर्णय, केहि अस्थायी छ। त्यसोभए भविष्यमा तपाईले फेरि त्यस खाता पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले फेरि लगइन गर्नु पर्छ। यो गर्नका लागि तपाईले पहिला फेसबुक इन्टर गर्नुपर्छ। यो दुबै कम्प्युटर र स्मार्टफोनमा सम्भव छ, यद्यपि यी चीजहरू अधिक सहज हुन्छन् यदि ती कम्प्यूटर संस्करणमा गरिन्छ भने।
एक पटक सामाजिक नेटवर्क भित्र, तपाईंले स्क्रीनको माथी दायाँ भागको तल एरोमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। जब तपाईं यो गर्नुहुन्छ, विभिन्न विकल्पहरूको साथ प्रस menu्ग मेनू देखा पर्दछ। यस सूचीमा विकल्प मध्ये एक कन्फिगरेसन हो। हामी यसमा क्लिक गर्छौं र कन्फिगरेसन प्रविष्ट गर्दछौं। अर्को हामी स्क्रिनको बायाँ तिर हेर्छौं। त्यहाँ त्यहाँ धेरै सेक्सनहरू छन्, तीमध्ये एउटा तपाईंको फेसबुक जानकारी, जसमा हामी क्लिक गर्दछौं।
त्यसो भए स्क्रिनको केन्द्रीय भागमा नयाँ विकल्पहरूको श्रृंखला देखा पर्दछ। ती मध्ये हामीसंग एक भनिन्छ तपाईको खाता र सूचना हटाउनुहोस्। यसको दायाँपट्टि त्यहाँ अवलोकन बटन छ, जहाँ हामी क्लिक गर्छौं, यो सेक्सन भित्रका विकल्पहरू हेर्नका लागि। त्यसोभए हामी हेर्नेछौं कि हामीसँग दुई विकल्पहरू छन्। ती मध्ये एउटा खाता निष्क्रिय गर्नु हो, जुन हाम्रो रुचि हो। हामी यसमा क्लिक गर्न, यसलाई अघि बढ्नको लागि। फेसबुकले हामीलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्नेछ, जसको साथ तिनीहरू हामी रहून् भन्ने चाहन्छन्, तर हामी जारी राख्नुपर्दछ, जबसम्म हामी अन्तिम चरणमा पुग्दैनौं। यसमा तपाईले खाता निष्क्रिय गर्न क्लिक गर्नुपर्नेछ। यो काम सकियो।
फेसबुक खाता मेटाउनुहोस्
यो दोस्रो विकल्प केही अधिक चरम छ, किनकि मान्दछ कि खाता पूर्ण रूपमा मेटिएको छ निश्चित रूपमा। यसको मतलब त्यो हो कि त्यस खातामा सबै चीज स्थायी रूपमा मेटिने छ। प्रक्रिया हामीले अघिल्लो केसमा पालना गरेको जस्तो मिल्दोजुल्दो छ। त्यसकारण, फेसबुक खोल्नुहोस् र स्क्रिनको माथि दायाँपट्टी तल एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भए, हामी सामाजिक नेटवर्कको कन्फिगरेसन प्रविष्ट गर्दछौं।
हामी फेरि स्क्रिनको बाँया भागमा हेर्छौं, जहाँ हामी तपाईंको फेसबुक जानकारी भनिने विकल्पमा क्लिक गर्दछौं। तब विकल्पहरू जुन यस सेक्सनलाई सन्दर्भ गर्दछ पर्दाको बीचमा देखा पर्नेछ। फेरि, हामीले सेक्शन प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ तपाईंको खाता र सूचना मेटाउनुहोस् भन्ने नाम राख्नुपर्दछ, त्यसैले हामी अवलोकनमा क्लिक गर्दछौं, त्यहाँ विकल्पहरू छन्। यसले हामीलाई नयाँ स्क्रिनमा लैजान्छ, जहाँ हामीसँग दुई विकल्पहरू छन् अगाडिबाट। सामाजिक नेटवर्कमा खाता निष्क्रिय गर्नुहोस् वा मेटाउनुहोस्। यस अवस्थामा, हामीलाई रुचि के हटाउनु हो।
खाता मेटाउन अगाडि बढ्नु अघि, हामीसँग फेसबुक खातामा भएका सबै डाटा डाउनलोड गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसको लागि तपाईले गर्नु पर्छ जानकारी डाउनलोड गर्न विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। यो तपाईं सामाजिक फोटो मा तपाईंको खातामा थिए कि सबै फोटो, भिडियो वा सन्देशहरूमा पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ। किनकि त्यहाँ सामान्यतया डाटा हुन्छ जुन तपाईंसँग मात्र यो हुन्छ, र तपाईं यसलाई हराउन चाहनुहुन्न। जब त्यो जानकारी डाउनलोड गरिएको छ, तपाईं अर्को चरणको लागि तयार हुनुहुन्छ।
त्यसो भए तपाईले डिलीट खातामा क्लिक गर्नुपर्नेछ, जुन तल नीलो बटन हो। हामीलाई के गर्न भनिएको पहिलो कुरा भनेको फेसबुक खाताको पासवर्ड प्रविष्टि गर्नु हो, यो कार्यको कार्यान्वयन गर्ने खाताको मालिक हो भनेर प्रमाणित गर्न। एक चोटि यो काम सकिसकेपछि, तपाईंले अन्तिम चरणमा नपुग्दासम्म तपाईंले स्क्रीनहरूको श्रृंखला अनुसरण गर्नुपर्नेछ, जुन खाताको उन्मूलन हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी मेरो फेसबुक खाता निस्क्रिय गर्ने